မွေးကင်းစကလေးကို အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်တဲ့ ပေါင်ဒါတို့ သနပ်ခါးတို့ သုံးပေး ၊ လမ်းပေးသင့်သလား? – BurmeseHearts
မွေးကင်းစကလေးကို အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်တဲ့ ပေါင်ဒါတို့ သနပ်ခါးတို့ သုံးပေး ၊ လမ်းပေးသင့်သလား?
ကလေးခြောက်လအထိ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်သူဖြစ်တဲ့ လူကြီးမိဘတွေက ရေမွှေးဆွတ်သုံးတာမျိုးအပါအဝင် ကလေးကိုလည်း ပေါင်ဒါ ၊ သနပ်ခါး အစရှိတဲ့ အမွှေးနံ့သာတွေကို မလိမ်းကျံပေးသင့်ပါဘူး။ မွေးကင်းစကလေးဟာ နုနယ်သေးတာမို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေနဲ့ အရောင်တွေကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် အသုံးပြုရမှာပါ။ ဥပမာ -ရေချိုးဆပ်ပြာ ၊ ခေါင်းလျှော်ရည် အစရှိသည်တို့ပါ။
နို့တိုက်ပုံတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ နို့တိုက်ကျွေးပုံက ဘယ်လိုလဲ?
ဘာကြောင့် မွေးကင်းစကလေးကို အမွှေးနံ့သာတွေ ရှောင်သုံးသင့်သလဲ?
နေ့မစေ့ ၊ လမစေ့ စောမွေးလာတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအမှန်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ကလေးငိုနေရင် အမြန်ဆုံး အငိုတိတ်အောင် ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲ?
မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေ ဘယ်နှစ်ကြိမ် နို့စို့တတ်သလဲ?
ကလေးရဲ့ မဖြောင့်သေးတဲ့ ခြေ ၊ လက်တွေဟာ ဘယ်တော့ ပြန်ဖြောင့်လာနိုင်သလဲ?
ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိနေရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်သလဲ?
BurmeseHearts	 Sep 6, 2015 0
ကလေးများအား ဆုံးမသွန်သင်ခြင်း အပိုင်း(၂)
အိမ်တွင် ကလေးအတွက် အရေးပေါ် ဆောင်ထားရမည့်ပစ္စည်း
ပညာဒါန စက်ချုပ်ဘာသာရပ်(Workshop)သင်တန်းတွေကို သင်မည့်သူ
iOS Developer ဖြစ်လာဖို့ Burmese Hearts မှာ စာရင်းသွင်းစို့
တသက်တာဒေါင်ဒေါင်မြည်နေဖို့ ကလေးပိစိအရွယ်ကစ ဂရုစိုက်ကြစို့
ဒီလိုသွားနေချိန်မှာ သန္ဓေသားဥဟာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲ?
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရာသီမှန် ၊ မမှန် ဘာကြောင့် သတိထားသင့်သလဲ?
မိဘကိုယ်တိုင် သတိမထားမိတဲ့ ပစ်ပယ်မှုများ
ကလေးတွေခံစားရတဲ့ စိတ်အားငယ်မှု အပိုင်း(၁)
လျှာဖျားအောက် လမ်းဆုံးသွားခဲ့ရသော ဘဝများ
မပျော်ရွှင်တဲ့ ကလေးငယ်များ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်